Faiba glaasi akwa
Nkọwa:Glass eriri nyo ákwà ka nke faiba glaasi yarn, na pụrụ iche ọgwụgwọ dị ka graphite, sịlịkọn, ptfe azọnye, megide acid ọgwụgwọ na ndị ọzọ na chemical ọgwụgwọ. ọ bụ ezigbo elu okpomọkụ iguzogide nyo ákwà na faiba glaasi nyo akpa na-n'ọtụtụ ebe na ulo oru ájá ọcha ebe, bag ụlọ, ikuku ndu na bara uru ájá imegharị ihe, wdg
Etu FMS na-eji akwa
5. Ọ bụ ndị dị ọnụ ala nyo media na akpa nyo filtration ubi. Polyester bag filter bụ ihe ndị kachasị ewu ewu na sistem ụlọ akpa.
PTFE nyo akwa
Nkọwa:PTFE agịga chere na-akpọ Teflon, na ezi arụmọrụ na okpomọkụ nke 260 centigrade, ozugbo okpomọkụ nwere ike na- 280 centigrade. PTFE nyo chere bụ a pụrụ iche ihe onwunwe na a ọma alkali na acid-eguzogide, mgbochi hydrolysis, anụ ahụ akụkụ, otú ahụ ka ptfe nyo akpa tumadi mee na coal ọkụ ji esi mmiri ọkụ, n'efu incineration, carbon nwa amị, Tio2 amị maka anwụrụ ọkụ ọgwụgwọ ma ọ bụ ájá collection , yana ụfọdụ okpomọkụ dị elu ma ọ bụ ụfọdụ nzacha mmiri na-emebi emebi.
Ọnọdụ okpomọkụ: 240 digri
Okpomọkụ Max: 260 ogo
P84 eriri bụ na cross ngalaba Ọdịdị (akwukwo udi), nwere nnukwu filtration ebe na magburu onwe filtration arụmọrụ.
Aramid akwa nhicha
Ogologo ọ bụla dị. Pụrụ iche size bụ customizable.
Pps na-edozi akwa
Acryli nyo akwa
Nkọwa:A na-eme akpa polyester ihe mkpuchi 100% filament polyester, mgbe agịgapịrị gbara agba, a na-akpọ caednder okpomọkụ ka calender maka ihe na-ahụ maka polyester filter, mgbe ahụ, polyester filter chere nwere ike itinye n'ime akpa polyester.
Nkọwa:Polyester fiber needled chere nkịtị okpomọkụ na-eji na-abụghị kpara agịga-ọkpọ ọkpọ usoro iji eriri staggered, ohere nkesa edo ezi eriri ákwà, polyester staple eriri na polyester gbagọrọ agbagọ yarn mmepụta site needled chere na-ekpo ọkụ, singeing, ma ọ bụ mkpuchi n'elu, dị ka post- nhazi, mee ka elu ya dị larịị, ọ naghị adị mfe ikpochi ya site na ájá, ihe nzacha porosity, permeability dị mma, jiri nnukwu oke, nguzogide siri ike na nkwụsi ike kemịkal, ọ bụghị naanị ike nyocha ụlọ gas, yana nzacha na acid na alkali corrosive gas, na ike iyo, mmanụ iyo, mmiri bụ nkịtị okpomọkụ ọnọdụ, siri ike-mmiri mmiri nkewa na ebe dị ka ezigbo nyo ihe onwunwe.
Home Previous 1 Osote ikpeazụ - Total 9 1 dere Ugbu A page / Total 1 20 kwa na peeji nke